Hiara-kiasa amin’ny fitsarana ny Bianco | NewsMada
Hiara-kiasa amin’ny fitsarana ny Bianco
Hohatsaraina mba hahazoana vokatra tsara kokoa amin’ny ady atao. « Hiezaka hitady ny fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ny fitsarana izahay, manomboka izao, mba hampahomby kokoa ny ady atao », hoy ny loharanom-baovao avy eny Ambohibao. Nambaran’ny eo anivon’ny Bianco fa tanjona ny hanarahana maso akaiky kokoa ireo raharaha tafiditra amin’ny resaka kolikoly nampidirina eny amin’ny fitsarana.
Anisan’ny mety ho tsy nampahomby ny ady amin’ny kolikoly ny tsy firindran’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fitsarana sy ny Bianco. « Ezahina ny hitadiavana fanavaozana momba ny fandrindrana ny fiaraha-miasa. Tokony hampidirina ao anatin’ny paikadim-pirenena hiadiana ny kolikoly koa izany », hoy ihany ny loharanom-baovao.
Nitondran’ny amerikanina tsikera ny fitsarana
Tsiahivina fa raharaha iray ihany no hany nandraisan’ny fitsarana fanapahan-kevitra.
Anisan’ny nanaovan’ny governemanta amerikanina, amin’ny alalan’ny sekreteram-panjakana, John Kerry, fanamarihana sy tsikera ny namotsoran’ny fitsarana ilay mpandraharaha, Bekasy, tafiditra amin’ny fanondranana an-tsokosoko andramena. Afa-maina sy nalefa nitsotsotra any ivelany na teo aza ny fandrarana ny tsy tokony hahafahany mivezivezy. Efa nanao ny asany sy ny ezaka rehetra anefa ny Bianco…